Si loo fahmo nooca khaladaadka ah ee dhici kara marka laga hadlayo jawaab celinta dadka tirada badan, aan ka fekereyno ra'yi ururinta cayayaanka suugaanta ee isku dayay in uu saadaaliyo natiijada doorashadii madaxweynenimada ee 1936. Inkasta oo ay dhacday in ka badan 75 sano ka hor, khilaafkan ayaa weli jira cashar muhiim ah oo lagu barayo cilmi-baarayaasha maanta.
Jariidadda suugaanta ayaa ahayd joornaal guud oo xiiso leh, oo laga bilaabo 1920-kii waxay billaabeen doorashooyin cows ah si ay u saadaaliyaan natiijada doorashada doorashooyinka. Si ay u sameeyaan saadaashan, waxay u diri lahaayeen codbixin dad badan oo ka dibna si fudud ugu soo celinayaan codadka la soo celiyay; Cilmi-baadhis ayaa si hufan u soo bandhigay in warqadaha cod-bixiyayaashu aanay helin "miisaan, isbeddel, loona fasirin." Habraacan ayaa si sax ah u saadaaliyay kuwa ku guuleystay doorashooyinka 1920, 1924, 1928 iyo 1932. Sanadkii 1936, oo ku dhexjiray Dhibaatada Weyn, suugaan Khariidadda ayaa u soo dirtay warqadaha codbixinta ilaa 10 milyan oo qof, kuwaas oo magacyadoodu badanaa ka soo baxeen tilifoonnada iyo diiwaanka diiwaangelinta gawaarida. Waa kuwan sida ay u sharraxeen qaabkoodii:
"DIGEST Mashiinka jilicsan ee dhaqdhaqaaqa ah wuxuu u guuraa si qoto dheer leh 30 sano oo waayo-aragnimo ah si loo yareeyo guesswork si loo helo xaqiiqooyin adag ... Toddobaadkan 500 oo roodaan ayaa soo baxayay in ka badan rubuc milyan milyan oo cinwaanno ah maalintii. Maalin kasta, qol aad u sareeya oo ka sarreeya wadada Fourth Avenue, ee New York, 400 oo shaqaale ah ayaa ku dhajiya malaayiin waxyaalood daabacan-oo ku filan in ay dhajiyaan afartan magaalo. Saacad kasta, oo ku yaal DIGESTIGA Tixraaca Boostada ee DIGEST, saddex mashiin oo mishiinnada mishiinnada mishiinka ah ayaa shaabadeeyaa oo ku dhajiyay qodobbo caddaan ah; shaqaale xirfad leh oo shaqaale ah ayaa u duulay iyaga oo ku dhajiyay waraaqaha; gawaarida DIGEST ayaa iyaga u soo bandhigay si ay u muujiyaan tareennada. . . Toddobaadka soo socda, jawaabaha ugu horreeya ee ka imanaya tobanka malyan ee adduunka ayaa billaabi doona soo-gelinta cod-bixinta ee calaamadaha lagu calaamadiyay, inay noqdaan kuwo saddex-mar ah la hubiyo, la xaqiijiyo, shan-jeer iskudhafsan oo la isku daro. Marka tiradii ugu dambaysay la dhammeeyo oo la hubiyo, haddii waayo-aragnimadii hore ay tahay shuruuda, waddanku wuxuu ogaan doonaa inta ka dhiman boqolkiiba 1 codadka rasmiga ah ee afartan milyan [codbixiyeyaasha]. "(Agoosto 22, 1936)
Suugaanta Dhayjast ee fetishization of size waa isla garan karo in kasta oo cilmi-"data weyn" maanta. 10 million oo codad ah ayaa loo qaybiyay, 2.4 milyan oo cajiib ah ayaa la soo celiyay - taas oo ah qiyaastii 1,000 jeer ka badan doorashooyinka siyaasadeed ee casriga ah. Laga soo bilaabo 2,4 milyan oo jawaab bixiyayaasha ah, xukunku wuxuu ahaa mid cad: Alf Landon wuxuu doonayaa inuu ku guuldareysto Franklin Roosevelt. Laakiin, dhab ahaantii, Roosevelt waxay ka adkaatay dhulgariir dhul ballaadhan. Muxuu noqon karaa Khariidadda Ereyga qalad u leh xog badan? Fahamka casriga ah ee tijaabinta ayaa ka dhigaya khaladaadka suugaanta 'Writ Digest' ee khaladaadka nadiifta ah waxayna naga caawineysaa inaan iska ilaalino qaladaadahan mustaqbalka.
Ka fekerida si taxadar leh oo ku saabsan baaritaanka waxay naga dooneysaa in aan tixgelinno afar kooxood oo kala duwan (shaxda 3.2). Kooxda koowaad waa dadweynaha la beegsanayo ; Tani waa kooxda cilmi-baadhuhu u qeexayo sida dadweynaha daneynaya. In the case of Suugaanta Dhayjast, dadka bartilmaameedka ahaa codbixiyayaasha ee doorashada Madaxweynaha 1936.
Ka dib markii la go'aamiyay dadweynaha bartilmaameedka, cilmi baaruhu wuxuu u baahan yahay inuu sameeyo liis dad ah oo loo isticmaali karo samaynta. Liiskaan waxaa loogu yeeraa qaab sawir ah , dadkana waxaa loogu yeeraa dadweynaha . Fikrad ahaan, dadka diirada u saaran iyo dadkaba waa inay isku mid noqdaan, laakiin marka la eego inta badan maahan kiiska. Tusaale ahaan, in ay dhacdo Suugaanta Dhayjast, dadka ku yiilleen ahaa 10 milyan oo qof oo magacyadoodu ku yimid u badan ka tusaha taleefanka iyo diiwaanada diiwaangelinta baabuurka. Farqiga udhexeeya dadweynaha iyo beesha dadweynaha waxaa loogu yeeraa qaladka caymiska . Qalabka caymisku keligiis ma'aha, damaanad qaadka. Si kastaba ha noqotee, waxay u horseedi kartaa foorjirin hoos- yimaada haddii dadku ay si caadi ah uga duwan yihiin dadka ku nool dadweynaha bartilmaameedsan kuwaas oo aan ku jirin dadweynaha. Tani waa, dhab ahaantii, dhab ahaantii waxa ka dhacay pollest Digest poll. Dadka ku nool dadkoodu waxay u muuqdaan inay u badan tahay inay taageeraan Alf Landon, sababtoo ah waxay ahaayeen kuwo hodon ah (xusuusnow in labadaba telefoonada iyo baabuurta ay ahaayeen kuwo cusub oo qaali ah 1936). Sidaa darteed, ra'yi ururinta suugaanta , khaladaadka caymisku wuxuu horseeday fara-gelinta caymiska.
Jaantus 3.2: Khaladaadka Matalada.
Ka dib markii la qeexay dadka jiran , tallaabada xigta waxay u tahay cilmi-baaris si loo doorto muunadda dadku u socoto ; kuwani waa dadka cilmi-baadhuhu isku dayi doono in wareysi lala yeesho. Haddii sambabku leeyahay dabeecado kala duwan oo ka badan dadweynaha, ka dibna tijaabinta waxay soo bandhigi kartaa qalad tijaabo ah . Si kastaba ha noqotee, fiyuusho suugaaneed ah , si kastaba ha ahaatee, dhab ahaantii ma jirin baaritaan-wargeyska si uu ula xariirto qof walba oo ku jira shaxda dadweynaha-sidaas daraadeed ma jirin qalad tijaabo ah. Cilmi-baarayaal badan ayaa diirada saaraya in qalabka la baadho-tani waa sida keliya ee qaladka ah ee lagu qabtay khaladaadka lagu soo warramey baadhitaanada-laakiin ficil-celinta suugaanta ayaa na xusuusinaya inaan u baahanahay in aan tixgelinno dhammaan ilo khaladka ah, labadaba iyo nidaamkaba.
Ugu dambeyntii, ka dib markii la doorto muunad dad ah, cilmi-baaruhu wuxuu isku dayayaa inuu wareysiyo dhammaan xubnihiisa. Dadka ku guuleysta waraysiga waxaa lagu magacaabaa jawaab-celin . Fikrad ahaan, saamiga dadweynaha iyo jawaab bixiyeyaashu waa isku mid, laakiin ficil ahaan waxaa jira jawaab la'aan. Taasi waa, dadka laga soo xulay tijaabada mararka qaarkood kama qayb galaan. Haddii dadka ka jawaaba ay ka duwanyihiin kuwa aan ka jawaabin, markaa waxaa jiri kara khiyaano aan sal u ahayn . Fududeyn la'aanta jawaab-celinta ayaa ahayd dhibaatada labaad ee ugu weyn ee ay soo saarto sanduuqa Digest . Kaliya 24% dadka helay cod bixinta ayaa ka jawaabay, waxayna u muuqatay in dadka taageera Landon ay u badan tahay inay wax ka qabtaan.
Marka laga soo tago oo kaliya tusaale ahaan soo bandhigida fikradaha wakiil, ra'yi-soo-saarka daabacan ee qoraaga ayaa ah maskax badan oo soo noqnoqota, ka digtoonayaasha cilmiga ku saabsan khatarta imtixaanka. Nasiib darro, waxaan u maleynayaa in casharka dad badani ka soo jeedaan sheekadani waa mid qaldan. Dhaqanka ugu caansan ee sheekada waa in cilmi-baarayaashu aysan wax ka baranin shay-yada aan la dhicin (ie, shaybaarka aan lahayn sharciyo adag oo saldhig u ah xulashada ka qaybgalayaasha). Laakiin, sida aan ku soo bandhigi doono cutubkan, taasi maaha mid sax ah. Taa bedelkeeda, waxaan u maleynayaa inay jiraan laba dabeecadood oo ku saabsan sheekadan; anshaxyada sida dhabta ah maanta sida ay ahaayeen 1936. Marka hore, qadar ballaadhan oo xog ururin ah oo la ururiyey ma xaqiijin doonto qiyaasta wanaagsan. Guud ahaan, in tiro badan oo ka mid ah jawaab bixiyeyaashu ay yareeyaan isbeddelka qiyaasaha, laakiin khasab kuma aha in la yareeyo khiyaamada. Iyadoo xog badan, cilmi-baarayaashu waxay mararka qaarkood heli karaan qiyaas sax ah oo khalad ah; waxay noqon karaan kuwo aan sax ahayn (McFarland and McFarland 2015) . Casharka labaad ee muhiimka ah ee Fikradaha Digest fiasco waa in cilmi-baadhayaashu ay u baahan yihiin inay xisaabiyaan sida ay sambaladooda loo ururiyey marka la qiyaasayo qiyaasaha. Taas macnaheedu waxa weeye, sababta oo ah habka tijaabada ah ee ra'yi-celinta suugaanta ayaa si nidaamsan loo xakameeyay qaar ka mid ah jawaab-celiyeyaasha, cilmi-baarayaashu waxay u baahnaayeen inay isticmaalaan habka qiyaasta ee qotodheer ee culeyska qaar ka mid ah jawaab-celiyeyaasha ka badan kuwa kale. Markaa kadib cutubkan, waxaan ku tusi doonaa habka miisaan-culeyska-dib-u-dhiska-kaas oo awood u siin kara inaad sameysid qiyaaso ka wanaagsan shay-baarka.